Jubbaland oo Maanta wafdi qiimeyn ah u direysa Ceelwaaq | dayniiile.com
Home WARKII Jubbaland oo Maanta wafdi qiimeyn ah u direysa Ceelwaaq
Jubbaland oo Maanta wafdi qiimeyn ah u direysa Ceelwaaq
Wafdiga oo isugu jiro Wasiiro katirsan Jubbaland iyo saraakiil Ciidan ayaa la filayaa inay Maanta oo Axad ah tagaan degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo, halkaas oo dhawaan lagu qabanayo doorashada 16 oo degaan doorashadoodu tahay Gobolka Gedo.
Sida wararka soo baxayo tabinayaan ujeedka safarkooda wafdiga ayaa ah hor-dhaca iyo qiimeyn magaalada lagu sameeynayo maadaama doorasho ay ka dhaceyso.
Galinkii danbe ee shalay ayaa laga bilaabay dhismaha hoolka doorashada garoonka diyaaradaha Ceelwaaq oo ay deganyihiin Ciidamada Kenya ee howlka ATMIS, iyada oo Amniga Magaalada siwryn loo adkeeyay.
Dhinaca kale Wararka Risaala ay heleyso ayaa sheegaya in Maamulka Gobolka Gedo ugu Magacaaban Gobolka Gedo uu wado qorsho uu uga hortagayo in doorasho lagu qabto degmada Ceelwaaq, iyada oo Guddoomiyaha Gobolkaas Axmed Buulle Gareed uu Maalin ka hor safar deg deg ah ku tegay Gobolka Gedo, isaga oo bilihii la soo dhaafay ku sugnaa Magaalada Muqdisho.
Doorashada 16 kursi ee taalla Gobolka Gedo ayaa soo maray xaalado kala duwan kadib markii ay isku fahmi waayeen Madaxda Jubbaland iyo Villa Somalia balse ugu dambeyn guddiga doorashooyinka Heer Federaal ay u wareejiyeen Degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo.
Previous articleNabaddoon lagu dilay Muqdisho & faah faahin laga helayo
Next articleGuddiga doorashooyinka Guddoonka Golaha Shacabka oo kulankii ugu horreeyay yeelanaya
Gaashaanle Muumin: “Wasiirka Arrimaha Dibadda XFS wuu ku degdegay weerarka uu...
Shacabka Pakistaan oo loogu baaqay inay iska yareeyaan cabidda shaaha badan
Maamulka Degmada Doolow oo diiday mid ka mid ah Siyaasiyiinta Gedo...
Mohamed Abdullahi Mohamed - June 14, 2022 0